Wuxuu u adeegsadaa PlayStation VR xitaa Real Gaming Gaming
Kaligaa keligaa ma tihid haddii aad ka fekereysid haddii ay jiraan cayaaro dhab ah oo xaqiiqo ah oo xaqiiqo ah si loo ogaado maalgelinta PlayStation VR, gaar ahaan marka loo baahan yahay baakidh VR iyo Kamera PlayStation. Inkastoo ay ku riyaaqday noocyo kala duwan oo loo yaqaan 'titles of launch', ma jirto ciyaar iskudhac ah oo runtii ka dhigeysa in ay tahay. Laakiin xitaa markaad qaadato dhammaan cayaaraha runta ah ee ka baxsan isla'egta, weli waxaa jira wax badan oo aad ku sameyn karto PlayStation VR. Xaqiiqdii, waxaa laga yaaba in aad la yaabto qaar ka mid ah isticmaalka, oo ay ku jirto awoodda isticmaalka VR dhegaysiga oo ka baxsan PlayStation.
Habka Xidigaha ee Ciyaaraha aan VR
Inkastoo PlayStation VR loogu talagalay in lagu ciyaaro cayaaraha dhabta ah ee runta ah, isticmaalka labaad ee ugu wanaagsan ee uusan ka dhicin geedkii. Marka aad bilowdo ciyaar aan taageernin xaqiiqda muuqaalka ah, kuleejku wuxuu geli doonaa "qaabka shahaadada." Nidaamkani wuxuu ku fadhiyaa lix fuudh oo ka fog shaashadda oo wuxuu ka yimaadaa saddex qaybood oo kala duwan: A screen-ka "117-inch" "Small", 163-inch "dhexdhexaad" shaashadda iyo shaashadda 226-inch "Large". Haddii aad ku qiyaastay inaadan arki karin dhamaan "shaashadda" oo dhan iyada oo aan dhaqaaqin madaxa, waxaad saxantahay. Xitaa shaashadda "Dhexdhexaad" waxay kugu qasbeysaa inaad madaxaaga u rogto si aad u fiiriso qaybaha kala duwan ee shaashadda.
Inta badan annaga ayaa ciyaaraya ciyaaraha shaashadda oo cabbiraya inta u dhaxeysa 40 inji iyo 60 inch oo garaac ah, sidaas darteed xitaa shaashadda "Small" waxay ku dhowaad laba jibbaar. Nasiib darro, shaashadda "Small" ayaa kula socota markaad madaxaaga jeesato, taas oo ka dhigaysa mid liidata ciyaaraha. Ama, runtii, ujeedooyin badan. Dhexdhexaadintu waxa ay u muuqataa in ay ku dhufatay baro macaan oo loogu talagalay ciyaaraha, laakiin Large wuxuu noqon karaa mid aad u fiican kulanada qaar ee aanad u baahneyn inaad ku qaadato shaashadda oo dhan mar.
Cayaartaan habkan ma aha mid aad u fiican. Dhamaan muuqaallada dhabta ah ee muuqaalka ah waxay qabaan "saameynta albaabka", taas oo asal ahaan awood u leh inay u kala soocaan pixel shaashadda shaashadda sababta oo ah indhahaagu waxay yihiin dhawr sawir oo kaliya oo ka soo baxa bandhigga. Kulanka PlayStation VR wuxuu qabaa shaqo weyn oo yareynaya saameynta, laakiin weli halkaa ayuu joogaa. Nasiib wanaag, waa wax sahlan in tani dhacdo marka ficilku bilowdo.
Habka Xajmiga ee Daawashada Movies iyo TV
Habka shaleemo ee isku midka ah wuxuu leeyahay ujeedo kale oo aad u fiican: daawashada filimada sida adiga oo ku jira masraxa filinka. Mar labaad, tani ma aha mid aad u fiican, laakiin xaqiiqdii waa fiicantahay filimkaas aad fileysay inaadan u qalmin in aad aragto masraxa. Iyada oo ay ku jiraan noocyo cajalad oo cajiib ah iyo qaabka shaxanka lagu dejiyo "Dhexdhexaad", waxay bixisaa waayo-aragnimo weyn oo leh hal xargo: waxaay ku raaxeysan kartaa in ay xirtaan xarkada kadib laba saacadood kadib. Dabcan, tani waa dhibaato leh VR gaming iyo isticmaal kasta oo kale.
Dhibaatadani daawashada filimkani waxay sii fiicnaan doontaa waqtigii Sony ay hagaajisay qaabka filimka (faraha faragelinta habka caadiga ah ee noo ogolaanaya in aan ku hagaajino cabbirka cabbirka ee dhererka) iyo bixiyeyaasha intooda badan waxay taageeraan VR gudaha appka. Hulu ayaa horayba u boodaysay guddi iyada oo la siinayo meel muuqaal ah oo lagu daawado filimaanta iyo TV-yada oo leh qolka quruxda badan ee la seexanayo quruxda magaalada oo leh telefishan weyn si ay u daawadaan dhacdooyinka ugu dambeeyay ee muujinta muujintaada. Waxaan rajeyneynaa, shirkadaha kale sida Netflix inay sida ugu dhakhsaha badan u dhaqmaan.
Fiiri filimaanta dhabta ah ee filimada
Waqtigan xaadirka ah, qaar badan oo ka mid ah filimaanta VR iyo videos waxaa laga helaa meel u dhaxaysa qabow iyo cheesy. Qaar badani ma haystaan ​​qaraar ku filan oo ku filan si ay xaqiiqda ugu qanciyaan khibrada. Waa wax xiiso leh inaad ogaatid marka ugu horeysa ee aad hesho PSVR, laakiin wax si dhakhso ah u dhaqmi doona asalka. Tani waa sababta oo ah ma jiraan wax badan oo fiidiyoow ah oo jira oo gaar ah loogu talagalay VR. Laakiin si tartiib ah, shirkadaha waxay abuurayaan VR maskaxda. Waxaad horey u hubin kartaa qaar ka mid ah kuwan muujinaya adeegyada sida Jaantuska, oo leh app ka mid ah dukaanka PlayStation leh qaababka la mid ah Hulu. Ma haystaan ​​joornaalka weli, laakiin qaar ayaa u muuqda sida Invasion, oo ah qiyaastii dhowr bikrad ah oo adduunka ka badbaadiya soo galootiga ajnabiga ah, muujin ballan badan.
Daawo VR Videos iyo Sawirro
Waxay u muuqan kartaa dib-u-celin, laakiin PlayStation VR waxay taageertaa fiidiyowga xaqiiqada dhabta ah. Waxaanu soo bandhigay filin gaar ah oo loogu talagalay VR, laakiin waxa laga yaabaa in xitaa xiiso badan ay tahay rajada laga qabo filimka guriga iyo 360 sawirada sawirada. Inkasta oo kamaradaha sare ee 360-ka ah sida GoPro Omni ay aad qaali u yihiin, dhamaadka hoose waxay noqoneysaa mid aad u badan oo la awoodi karo. Tani waxay qaadan kartaa fikradda ah inay dadka ku martiqaado si ay u la kulmaan fasaxa qoyskaaga ilaa heer cusub.
Waxaad fiirin kartaa fiidiyowga VR iyo sawirada iyaga oo u keydsanaya USB-ga oo ku dhex geliya mid ka mid ah boosaska PS4. Ciyaartoyda Saxaafadda ee PS4 waxay taageertaa fiidiyowga VR inta badan qaababka caadiga ah.
YouTube sidoo kale waxay taageertaa PlayStation VR. Marka aad bilawday barnaamijka YouTube-ka marka aad dhegeysigaagu u jeedo, waxaa lagu weydiin doonaa haddii aad rabto inaad bilowdo barnaamijka dhabta ah ee YouTube. Qaabkan wuxuu kuu ogolaanayaa inaad daawato fiidiyowga 360 darajada ah ee ku qoran bogga. Iyo sida aad u maleyn karto, waxaa jira fiidiyowyo badan oo ka mid ah fadhiya garoon lagu daaweynayo ciyaar kubadda cagta ah si ay u noqoto mid hore loogu soo bandhigo riwaayad si ay u fuushaan dhejis.
Cayaaraha ama Daawashada Filimadu Inkastoo TV-ga Isticmaalayo
Haddii TV-yada PlayStation-ka ay wadaagaan xubno badan oo ka tirsan qoyska, khiyaanadaasi waxay u adeegsan kartaa. Qalabka Isboortiga ee PlayStation VR wuxuu kala qaybiyaa calaamadaha fiidiyowga, mid u diraya kulayliyaha iyo midda telefishanka. Si kastaba ha noqotee, haddii aadan ciyaareynin cayaarta isticmaaleysa labada shaashad sida Heysashada Talking and Nobody Explosions, ma jirto sabab ay TV-ga xaqiiqda ugu baahan tahay inay muujiso waxa ku jira PS4. Tani waxay ka dhigan tahay in qofku isha ku hayn karo telefishanka halka mid kale uu ciyaarayo ama uu daawanayo filin iyadoo la adeegsanayo dhegeysiga PSVR.
Cayaaro XBOX ONE, XBOX 360 ama Wii U Games With It
Fadlan ku filan, XBOX-gaagu wuxuu ka heli karaa madadaalada. Habka filimku wuxuu u shaqeeyaa fiidiyo kasta oo ka soo baxaya fiilada HDMI. Sidaa darteed haddii aad ka bedesho HDMI IN ka soo qaadashadaada PS4-kaaga si aad u hesho cable kale oo HDMI, waxaad dhab ahaantii ka ciyaari kartaa XBOX ONE, XBOX 360, Wii U ama ciyaar kasta oo ka socda konsole oo leh dekedda HDMI OUT. Xitaa waxaad ku xiran kartaa PC-gaaga haddii ay taageerto HDMI.
Mid ka mid ah xarigga ayaa ah in xarun VR loo shaqeynayo weli waa in lagu xiro PS4 iyada oo loo marayo fiilada USB si ay gacan uga geysato kantaroolka qaabka filimka, iyo, si cad, PS4 waa in weli loo rogaa.
Aynu ilaawin waayo-aragnimada meditative ee ku jirta xaqiiqda dhijitaalka ah. Harmonix Music waxaa laga yaabaa inay ugu fiican tahay laynka Rock Band ee cayaaraha muusikada, laakiin waxay ku tashadaan khibrada VR iyagoo leh Harmonix Music VR. "Ciyaarta" (oo loo isticmaalo dabacsan) ayaa kuu ogolaanaya inaad ka safartid jasiiradda illaa jasiiradda oo aad nasato waayo-aragnimo maqal-muuqaal ah. Xitaa waxaad ku xiran kartaa maktabadda muusikadaada halkii aad kuxirantay mid ka mid ah tobanka iyo tobnaad ee jadwalka ee la socda cinwaanka.
... Iyo Waxyaabaha Dadka Waaweyn
Uma maleyneynin in warshadaha porno ay ku wiiqmeen xaqiiqda dheelitirka, ma adigaa? Qaar badan oo ka mid ah boggaga internetka ee dadka waaweyn ee fiidiyoowga ah ayaa hadda bixiya qayb muuqaal ah oo muuqaal ah. Si kastaba ha ahaatee, browser-ka shabakada ee PlayStation 4 weli wali ma taageeri karo xaqiiqada muuqaalka ah, markaa si aad u ciyaarto fiidiyowyadan, waxaad u baahan doontaa inaad u soo qaadato USB-ga kombiyuutarka oo ku dhegee dekedda USB-ka ee PlayStation 4.
Wax ka soo dejinta bogga qaangaarka ee dadka waaweyn fikrad wanaagsan? Runtii maahan.
Mustaqbalka Isticmaalaya Ku dar Safar, Daraasad iyo Waxbarasho
Mid ka mid ah isticmaalka ugu xiisaha badan geeska geeska ee PlayStation VR waa socdaal. Horeba, shirkadaha sida Hilton iyo Reel FX waxay soo saaraan fiidiyowyo safar ah sida Destination: Inspiration, taas oo noqon karta hab weyn oo lagu baadho qaybo ka mid ah adduunka oo aynaan waligeed arkaynin oo laga yaabo in ay go'aan ka gaaraan safarka socdaalka socdaalka.
Socdaalku maaha meesha keliya ee VR-du ka fiican tahay. Sahaminta iyo waxbarashadu waa laba goobood oo u muuqda dabiiciga ah. Tani waxaa lagu muujiyay waayo-aragnimada "Ocean Descent" ee PlayStation Worlds. "Waayo-aragnimo" halkii aad ka ciyaari laheyd, Baadiyaha Ocean waxay hoos u dhigtaa biyaha ilaa sedex meelood oo kala duwan, taas oo kuu oggolaanaysa inaad hubiso nolosha badda ee ku dabaalaneysa. Heerka ugu hooseeya wuxuu ka muuqdaa muuqaal aan fiicnayn oo aan ku faraxsaneyn inuu ku arko. Ku dhawaaq sida wax ka socda safar waxbarasho ilaa badda adduunka? Waxaad sharxi.
Sida loo Isticmaalayo shabakadda webka ee PS4
9ka Ciyaartood ee ugu Fiican PlayStation 4 Games si loo iibsado 2018
Batman: Arkham City - Xilliga Dib u Eegista Sanadka (PS3)
Pac-Man khiyaamaynta ciyaaraha PlayStation (PS1)
Disney Infinity 3.0 iyo Skylanders Super Chargers
PlayStation VR: Waxkasta oo aad u Baahantahay inaad ogaatid
Tales ka socda Xuduudaha: Qorshaha Ka-baxa Bravo PS4
Talooyin iyo Tricks si aad ugu guulaysatid 'Dambiga Runta ah' New York City 'ee PS2
Abuur GIF leh barnaamijka Giphy Cam App
Ku bilaw daabacaadda Muuqaalka Desktop ama Business Design Graphic
10ka heerarka ugu hooseeya ee DSLR Cameroon ee Bilawga ah ee iibsanaya sannadka 2018
Sidee si degdeg ah ugu dari kartaa Magacyada iyo Cinwaanada Waraaqaha leh Warqad U Diritaan
9 Niche Shabakadaha Isku-xirka Bulshada si aad u hubiso
Isticmaalka Xakamaynta Maqnaanshaha Macmiilka
Awoodda Xayeysiinta Shisheeye ee Xogta Iskuduwida
Nidaamka Masraxa Fiican ee Ardayda Kulliyadda
Tababarka loogu talagalay Abuurista Channel Channel
Dulmarka guud ee Yamaha NS-Segaha Yamaha Subagga Dhexdhexaadka ah ee Yamaha Dhexe
Sidee loo xalliyaa Dhaqdhaqaaqa Raadinta ee iPhone
Ma isku darsatay DD-WRT qalabaynta?
7 Meelood ee Best To Buy for Kids ee 2018
Meelaha ugu Wanaagsan ee loogu talagalay Dhalinyarada
Ma ogtahay inaad ku biiri karto Twitch Prime for Free?
Windows Best Apps ee Beginners
Waa maxay Erayada Lahaanshaha?
Sida Loo Helo Xidhiidh Macquul ah Ka Yahoo! Boostada
Maxay tahay mashiinka shabakadaha kombuyuutarada?
Dib u eegista Paint.NET